ciyaaraha Archives -
Juventus & Barcelona Oo Dhamaystiray Isdhaafsiga Xiddigaha Arthur Melo & Miralem Pjanic
June 27, 2020 F.G 0
Heshiiska uu Xiddiga Barcelona ee Arthur Melo ugu biirayo Juventus xiddiga Juventus ee Miralem Pjanic ugu biirayo Barcelona ayaa haatan la dhamaystiray. Wax walba waxa la dhamaystiray xalay sida uu sheegayo wargayska Sport iyada oo labada xiddigba kala ogolaadeen heshiisyada ay ugu biirayaan labada kooxood. Heshiiska ayaa ku kacaya in in uu Arthur ku biirayo kooxda Juventus lacag dhan 70 milyan oo euro halka uu xiddiga Pjanic ugu biirayo Barcelona 60 milyan oo euro. Xiddigaha ayaa todobaadkan isku dhaafi doona magaalooyinka Torino iyo Barcelona si ay u maraan tijaabada caafimaadka ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin heshiiska. Marka ay labada kooxood dhamaystiraan heshiiska labada xiddig waxa uu mid walba xiddiga sii haysan doonaa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan iyada oo labada xiddig la sii joogi doonaan kooxohooda haatan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan
Carlo Ancelotti “Waan Rajaynayaa In Aan Tababare U Noqdo Lionle Messi, “
June 20, 2020 F.G 0
Tababaraha Kooxda Everton ee Carlo Ancelotti ayaa sheegay in uu Rajaynayay in uu tababare u noqdo Xiddiga Barcelona ee Lionel Messi. Carlo Ancelotti ayaa tababare soo aha atan ilaa 1995 waxana uu soo tababaray xiddigo badan oo ka mid ah xiddigaha ugu fiican taariikhda kubada cagta kana mid yahay Xiddiga Juventus ee Cristiano Ronaldo. Laakiin Carlo Ancelotti ayaa qirtay in uu rajaynayay in uu tababare u noqdo xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi xilli uu ka sheekaynayay xirfadiisa tababaranimo Carlo Ancelotti oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi”Waxa aan rajaynayay in aan tababare u noqdo Lionel Messi kaliya si aan isku bar-bar dhigo isaga iyo Cristiano Ronaldo”. ilaa haatan ma jiro tababare soo wada tababaray labada xiddig sanadihii la soo dhaafay taas oo ah arin adag marka laga hadlayo sanadihii la soo dhaafay.
Waa Sidee Kala Saraynta Horyaalka La Liga Kadib Todobaadkii 28-aad.
June 15, 2020 F.G 0
Waxa la soo Afjaray todobaadkii 28-aad ee horyaalka La Loga kaas oo si Rasmi ah u bilowday Kadib markii uu muddo 3 bilood ah joojiyay xanuunka Korona. Todobaadkan waxa guul gaadhay Kooxda Barcelona kuwaas oo 4/0 ku garaacay kooxda Real Mallorca kulan uu gool dhaliyay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi. Dhanka kale Real Madrid ayaa guul ay u qalantay ka gaadhay kooxda Eibar kadib guuldaradii soo gaadhay kulankii Real Betis ee ka hor intii aan la joojin horyaa;ka. Dhanka kale Atletico Madrid ayaa bar-baro la gashay kooxda Athletic Bilbao xilli ay kooxda Roji Blancos sii wado natiijooyinka xun ee xilli ciyaareedkan. Messi oo dhaliyay gool ayaa sii dheeraystay hogaanka gool dhalinta horyaalka La Liga isaga oo 6 gool ka dambeeya xiddiga ugu soo dhaw. Hadaba Halkan Hoose Kaga Bogo Sida Loo Kala sareeyo Gool dhalinta Horyaalka La Liga: Lionel Messi (Barcelona) 20 Gool Karin Benzema (Real Madrid) 14 Luis Suarez (Barcelona) 11 Lucas Pérez (Alaves) 11 Lucas Ocampos (Sevilla) 11 Gerard Moreno (Villarreal) 11 Roger Martí (Levante) 11 Ángel Rodríguez (Getafe) 10 Mikel Oyarzabal [Sii aqri]
WARBIXIN: 50-kii Saxeex Ee Ugu Wanaagsanaa Taariikhda Premier League Oo La Shaaciyey,
April 8, 2020 F.G 0
20 sannadood ka hor, horyaalka Premier League caan kuma ahayn inuu iibsado ciyaartooyo qaali ah, sidoo kalena ciyaartoyda waaweyn ee magaca leh may tegi jirin, laakiin cudud dhaqaale oo ay yeesheen intii ka dambaysay waqtigaas waxay ku kasbadeen in tartanku noqdo midka dunida loogu daawashada badan yahay. Dhaqaalaha faraha badan ee ay heleen kooxuhu iyo sida ay xuquuqda baahinta telefishannada ugu siman yihiin kooxaha yaryar ilaa kuwa waaweyn ayaa waxay siisay inay si siman u koraan dhaqaale ahaan marka la barbar-dhigo tartamada kale. Saamaynta ugu weyn ee koboca kooxaha Premier League waxa keenay maalqabeenno iibsaday inta badan kooxaha waaweyn, sida Manchester United, Chelsea, Liverpool iyo Manchester City, kuwaas oo awood u yeeshay in ciyaartoyda ay doonaan ay soo iibsan karaan. Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa 50-kii ciyaartoy ee ugu wanaagsanaa ee kooxaha Premier League ay soo iibsadeen taariikhdooda, waxaanay iskugu jiraan kuwo gudaha kooxahan u kala wareegay iyo kuwa dibedda ka yimid, laakiin dhinaca kale waxa iyaguna ka mid ah laacibiin xilli hore duqoobay oo kubadda ka fadhiistay iyo ciyaartooyo waqtigan garoomada ku [Sii aqri]
Maxaa Ka Jiro In Xidiga Babacar Sarr 29-sano-jirka ah Lagu Soo Ogay Dacwad?
March 8, 2020 F.G 0
Xidiga Babacar Sarr waa 29-sano-jir cayaartoy ah oo kooxo waaweyn oo dunida ka dhisan usoo saftay, waxaana ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dunida ee lacagaha ugu badan qaata. Sidoo kale waa eedeysane, dalka Norway ayaa looga haystaa eedeymo kufsi ah, waxaana loo jaray warqad caalami ah oo lagu soo xirayo. Wuxuu hadda ku jiraa dhuumaaleysi wuxuuna ka mirqay saaxadda cayaaraha.Sarr waa weerar yahan u dhashay dalka Senegal, kaas oo sumcadda xirfaddiisa ay ku dhisantay dalka Norway, kahor inta uusan u safan kooxo waaweyn oo ka dhisan Ruushka iyo Sacuudiga. Xiddig ayuu ka ahaa Molde, oo ah naadi weyn oo ka dhisan Norway kaasoo uu ku biiray sanadkii 2016. Labo sano ayuu naadigaasi u dheelayay xilligii uu maamulaha ka ahaa Ole Gunnar Solskjaer – oo haatan ah maamulaha Manchester United.
Naadiga Manchester City oo labo xilli ciyaareed laga ganaaxay Horyaalka Qaaradda Yurub
February 15, 2020 F.G 0
Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Yurub ee Uefa ayaa labo xilli ciyaareed kooxda Manchester City ka ganaaxay dheelista horyaalka qaaradda yurub ee Champion’ Liig’ga. Sidoo kale kooxda Man City ayaa lagu ganaaxay in ay bixiso lacag dhan 30 milyan oo yuurow. Masuuliyiinta kooxda ayaa sheegtay in ay aad uga niyad jabeen go’aanka kooxda balse ay nacfaan ka qaadan doonaan. Sidoo kale waxaa jirto cabsi ah in kooxda Manchester City laga dhimo dhibcaha horyaalka Ingiriiska ay ka heesato maadaama wada shaqayn wanaagsan ay ka dhaxeeso xiriirka ku badda cagta ee qaaradda yurub iyo kan Ingiriiska.
Tababaraha Xulka Qaranka Soomaaliya oo Shaqada isaga tagay Sabab Amni
February 11, 2020 F.G 0
11 Bilood kadib, Macalinkii Xulka Qaranka Soomaaliya Ghanaian Bashir Hayford ee u dhashay Dalka Ghana ayaa shaqada isaga tagay sabab la xiriirta Amniga Soomaaliya ee dhaca Bariga Afrika. Macalinkaan waxa uu sheegay in heer wanaagsan uu gaarsiiyay Xulka Qaranka Soomaaliya, mudadii uu maamulka u hayay, waxaana uu sheegay in amni darrada awgeed uu kaga tagay shaqadiisa. Inta uu hogaanka u hayay Shaqada Xiddiga Badweynta (Ocean Stars) waxa uu la gaaray guul Muhiim ah, kadib markii ay garaaceen Xulka Zimbabwe lugtii hore ee is reeb-reebka koobka Adduunka 2022 lagu qabanayo Dalka Qatar. Waxa uu ku guul dareystay in uu Xulka Soomaaliya oo Najiito wanaagsan heystay uu usoo saaro Wareegyada kale ee Is reeb-reebka Dhacda Adduunka 2022-ka, maadaama Xul Zimbabwe oo guridooda ku dheelayay ay heleen natiijo ah 3-1, sidaasna ay kusoo baxeen. Hayford waxa uu shaqada Qaranka Soomaaliya qabtay sanadkii 2019-kii, waxaana xiligaas uu kasoo tagay Maamulka Xulka Haweenka Ghana oo uu macalin u noqday Bishii August 2018-kii. Xulka Soomaaliya ayaa ka baaraan-degaya macalinka xiga ee Buuxinaya booska uu baneeyay Ghanaian Bashir Hayford oo dadka falanqeeya [Sii aqri]
Xulka Soomaaliya oo Guul muhiim ah ka gaaray Tartanka Cecafa Senior Challange Cup
December 13, 2019 F.G 0
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa galabta ciyaar xiiso badneyd oo xulka Qaranka Burundi kula ciyaareen magaalada Kampala ee caaimada dalka Uganda kaga gaaray guul aad muhiim ugu aheyd. Ciyaartoyda Qaranka Soomaaliya ee ka qeyb galeysa tartanka Cecafa Senior Challange Cup ee ka socda dalka Uganda ayaa hal gool iyo eber waxa ay uga adkaadeen Xulka Qaranka Burundi Xulka Qaranka Soomaaliya gool qurux badan waxaa guusha ugu horseeday Ciyaaryahanka nomberka 10-aad u xiran ee Cumar Maxamed , waxaana guushan soo nooleesay rajada Xulka Soomaaliya ee tartanka. Soomaaliya ayaa hada leh 4-Dhibcood , waxaana kulanka ugu dambeeya ee Guruubka Soomaaliya la ciyaari doontaa xulka kubada Cagta ee Eritrea oo wacdaro sanadkan ka dhigaya koobkan ka socda dalka Uganda. Ciyaartoyda Soomaaliya ku matalaya tartanka Cecafa Senior Challange Cup ayaa u badan ciyaartoy laga soo xulay Qurbaha, waxa ayna ciyaartoydan kor u qaadayaan magaca Soomaaliya ee kubada cagta,
Messi oo markii lixaad ku guuleystay laacibka dunida.
September 24, 2019 F.G 0
Ciyaaryahanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guulaystay, ciyaartoyga ugu ragga ee billadda ay bixiso Fifa, taas oo lagu guddoonsiiyey Milan. Isaga oo ka qaaday ciyaartoyga reer Juventus ee Cristiano Ronaldo iyo ka Liverpool ee Virgil van Dijk. waa markii lixaad ee Messi loogu codeeyo ciyaartoyga u fiican dunida. tabbabaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa isna ku guulaystay tababaraha ugu fiican sannadka. Klopp ayaa loo magacaabay billaddan iyaga oo ay labada tababare ee Horyaalka Ingiriiska wada joogaan. Waa tababaraha Manchester City Pep Guardiola iyo tababaraha Tottenham Mauricio Pochetttino. kooxda Liverpool ayaa ku garaacday koobka Horyaallada Yurub ee Champions League, ciyaartii kamadambaysta ahayd ee June qabsoontay. Iyagoo sida kalena kaalinta labaad ka galay horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedkii 2018-2019. Kooxda Liverpool ayaa sidoo kale ku guulaystay lix ciyaarood xilli ciyaaredkan bilawga ah ee 2019-2020. “Waxa ay ahayd sarrayn, qofna ma uusa fileyn labaatan sano, toban sano, shan sano, afar sano ka hor inaannu halkan soo istaagi doonno” ayuu Klopp. Waan kuu ognahay, shaqadii wanaagsanayd ee qabatay adigu [Mauricio Pochettino] iyo weliba Pep. Waa inaan idin idhaahdaa Mahadsanidiin [Sii aqri]
September 6, 2019 F.G 0
Koox ka mid ah taageerayaasha Inter Milan ayaa sheegay in daawadayaashii ciyaartii Cagliari ay Romelu Lukaku u muujiyeen “xushmad” markii ay ku tilmaamayeen daanyeer oo hees ay ugu qaadeen. Lukaku, oo ka soo tagay Manchester United ayaa xagaagan ku biiray Inter Milan, wuxuuna la kulmay xadgudub cunsurinimo ah ka dib markii uu dhaliyay goolkii guusha ee ciyaartii ku dhammaatay 2-1. Qoraal ka soo baxay kooxda taageerayaasha Inter Milan ee Curva Nord waxaa lagu sheegay: “Taageerayaasha reer Taliyaani ma ahan cunsuriyiin”, xad gudubkana wuxuu ahaa mid ku kooban ciyaarta. Waxaa intaa lagu daray: “Waan ka xunnahay in wixii ka dhacay Cagliari aad u maleysay cunsuriyad”. Warqadda furan ee loo diray laacibka u dhashay Belgium waxaa lagu daabacay bogga Facebook ee taageerayaasha, waxaana sidoo kale lagu qoray: “Waa inaad fahantaa in Taliyaaniga uusan la mid ahayd dalalka Woqooyiga Yurub oo cunsuriyaddu ay ka tahay dhibaato dhab ah”. “Waan fahansannahay in adiga ay kuula muuqan kartay cunsuriyad balse sidaas ma ahan. Waxaan gudaha Taliyaaniga ku adeegsanaa ‘qaabad’ ku kooban ‘caawinta kooxdeena’ iyo in aan ka careysiino dhinaca naga [Sii aqri]